Afọ 36 agafeela kemgbe Apple's IPO | Esi m mac
Apple bidoro ọtụtụ akụkọ ịga nke ọma na Disemba 12, 1980. N’ụbọchị ahụ, afọ iri atọ na isii gara aga, Apple Computer Inc. gaa n'ihu ọha na-ere nde 4,6 na ihe dịka $ 22 ọ bụla.
N'ụzọ dị otú a, ụlọ ọrụ ahụ mepụtara nha nha nha karịa ahịa ọ bụla na akụkọ ihe mere eme nke United StatesEbe ọ bụ na Motorlọ ọrụ Ford Motor na 1956. Dịka anyị niile maara, ebuka taa enweela ekele dị ukwuu.
Companylọ ọrụ ụlọ ọrụ Cupertino malitere njem ya ugbu a NASDAQ (Akpa North America) nwere ebumnuche doro anya, iji nwee ike ihu mmepe nke Lisa na Macintosh ya, inwe ike iji kwado ọrụ mbụ gị. Ọ bụ ezie na anyị maara na ọrụ ndị a abụghị ihe ịga nke ọma maka ụlọ ọrụ ahụ, na afọ ndị mbụ mburu ekele ruru 200%.
Mgbe ọtụtụ afọ nke ọgba aghara nchịkwa, na ọpụpụ nke Steve Jobs na ụlọ ọrụ na nloghachi ya mgbe ọtụtụ afọ gachara, Apple tara ahụhụ ogologo oge na-enweghị nsogbu na ngwaahịa ahịa, nke gosipụtara na omume ya na, n'ezie, na ire ngwaahịa ya ... Na mbata Steve, na iwebata ngwaahịa dịka iPod ma ọ bụ Mac, Apple obere ntakịrị jiri kwadoo ọnụ ọgụgụ ego ya.
Mana, ọ bụ rue 2008, mgbe Apple wepụrụ n'ụzọ dị egwu ma bulie ọnụ ahịa ya na ọnụ ọgụgụ ndị a na-apụghị ichetụ n'echiche. Na mbata nke iPhone, n'agbanyeghị echiche enweghị nchekwube n'ihi ọgba aghara ụwa nke buru amụma ọdịda nke ahịa ụwa, Apple (ma ọ bụ AAPL, dịka ụlọ ọrụ ahụ maara na ahịa ngwaahịa America) jisiri ike tinye onwe ya dịka otu n'ime ụlọ ọrụ kacha ike na ụlọ ọrụ dị ike na NASDAQ.
Kemgbe ahụ, ahịa Apple na-aga n'ihu na uru ahịa ya bụ ngosipụta nke a: ugbu a, afọ 36 ka e mesịrị, akụkụ ọ bụla nke ụlọ ọrụ ahụ ejirila 18.492% nwee ekele. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, onye zụtara naanị òkè abụọ na 1980 ga-abụ nde mmadụ taa.
Companylọ ọrụ anaghị akwụsị ebe ahụ. Ha na-eme ka mbara igwe na-amụba, abanye ahịa dị ka India ma ọ bụ Israel, na-agbasawanye ọrụ ya, na-emeziwanye na nkọwa niile,… A ka nwere ọtụtụ akụkọ ntolite ide.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Afọ 36 agafeela kemgbe Apple's IPO
Ihe kacha mma maka MacBook gị